5 sababood oo loo qaadan karo Naqshadaynta Jawaabta 2014 | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Naqshad
Laga soo bilaabo Firefox mania (Beesha Mozilla ee Cuba) waxaan helnay muuqaalkan sharaxaad leh ee sharaxaya (ingiriisida, haa) sababta aan sifiican ugufiirineyno Naqshadeynta Mas'uulka ah ama, sida ay ku dhahaan Ingriiska, Naqshadeynta Jawaabta.
1 Naqshadaynta jawaabta ah?
Naqshadaynta jawaabta ah?
Si loo sharaxo iyada oo aan la helin farsamooyin badan ama fikrado adag, Naqshadeynta Naqshadeynta ayaa ah 'nooca' naqshadeynta aan ka helno bogagga sida DesdeLinux oo isbedelaya, iyadu 'wax ayey ka beddeleysaa' lafteeda iyadoo kuxiran xalka shaashadda akhristaha.
Ka soo qaad inaad ka soo booqato FromLinux kombuyuutarkaaga qaraar dhan 1366 × 768 (shaashad ballaaran), waxaad ku arki doontaa baloogga hal qaab. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka soo booqato aaladda moobiilka sida taleefanka casriga ah ama kaniiniga, waxaad arki doontaa in nashqaddiisu ay waxoogaa ku kala duwan tahay, sidaa darteed uma baahnid inaad rogrogmadaan ama aad u rogrogmadaan si qumman, kaliya toosan, marka lagu daro in meelo kala duwan lagugu muujiyo ama aan la tusin) waxyaabaha sida menu, sidebar, iwm. Waxaas oo dhami waxay akhriska iyo daalacashada ka dhigaysaa mid raaxo leh, sax?
Sida aad u arki karto dhamaadka, sawirka ayaa asal ahaan ka yimid GenetechSolutions.com.
Sababaha sida ... Google ayaa kugula talinaya iyo, in kastoo qaar badan oo ka mid ah aysan dan ka lahayn waxa Google uu sheegayo ama uusan dhihin, runta ayaa ah inay tahay aaladda ugu caansan raadinta meeraha, waxa uu sheegayo waa inay muhiim tahay haddii aad rabto in bartaadu ay ka sii badato ama aan muuqan, in waxa aad qorto ama aad bixiso ay ku raaxeysan karaan dhowr.
90% dadku waxay u wareegayaan shaashado kala duwan oo kala duwan si ay u galaan internetka, taas oo asal ahaan ka dhigan tahay inaan ka helno internetka KELIYA kumbuyuutarka gurigeenna, laakiin sidoo kale qayb ka mid ah telefishankayaga casriga ah (kuwa haysta), casriga ah kiniin, iwm.
Qaabeynta qaabkan ayaa ka fudud in la ilaaliyo oo la taageero, sidoo kale waxay leedahay nolol dheer ... waad ogtahay, wixii si wanaagsan loo qabtay ayaa sii jiraya.
Iyo in ka badan, waxaa sawirka ka muuqda qaab muuqaal ah oo dhameystiran.
Waan ku faraxsanahay in maadamaLLLL ay horey u laheyd mowduuc jawaab celin ah in mudo ah, hada yaa ilaalinaya waa waxbadan oo ... waxaan horeyba u sugeynaa dhamaanteen inaan ku raacno inaan sii deyno nooca xiga
Ma haysaa goobta Naqshadeynta Jawaabta? Miyaad wax shaki ah ama su'aal ah ka qabtaa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Naqshad » 5 sababood oo loo qaato Naqshadaynta Jawaabta sanadka 2014
Goob sidan oo kale ah ayaa horeyba loogu baahan yahay asal ahaan, ku dhowaad sida bog kasta waa inuu leeyahay javascirpt! oo leh mowjadaha hadda jira waa mid aad u fudud.
Sidoo kale ma dhaawaceyso ISTICMAALKA MASUULIYADDA EE ISBANAYSAN
Marka, naqshadaynta la qabsiga ama naqshadeynta korsashada waxay noqon doontaa eraybixinta saxda ah ee la isticmaali karo, sida ugu fudud ee loo heli karo sida looga raadinayo Google lafteeda haddii aadan ka tarjumi karin Ingiriisiga
Waan ku raacsanahay in tarjumaada "masuul" sida asxaabteena u dhigey aysan aheyn tarjumadii ugu fiicneyd
Laakiin qaadashada naqshadeynta wax shaqo ah kuma lahan sidoo kale ... maadaama aysan tixraacin qaadashada naqshadeynta, laakiin in lala qabsado naqshad qaab.
Dhankeyga, waxaan u maleynayaa inay caafimaad tahay in ereyada qaarkood aan toos loo tarjumin. ee
saamaxa la qabsiga
Waxaan u maleynayaa in tarjumaadda suugaanta ah "jawaabta" ay ku filan tahay.
Fudud, baro Ingiriisiga, waa inaad ogaataa in macluumaadka ugufiican uu kujiro afkaas waligiisna sidaas ayuu ahaan doonaa.
U jawaab aabbahaa
Aad ayaan kugula raacsanahay mitcoes, marwalba waan idhi, waxaa layiri Adaptive, not Responsive.
Taasi waa dhibaatada aan garanayn sida loo akhriyo qaamuuska RAE.
Waxaan sidoo kale qaatay naqshad jawaab celin ah 2 sano kahor.
Buug-gacmeed wanaagsan oo mawduuca ku saabsan wuu fiicnaan lahaa, way igu adag tahay inaan la qabsado.
"Hormarinta" qaabeynta noocan ahi waa lama huraan, mar dambe ma ogaan doonno mana aha inaan ka ogaanno nooca xallinta shaashadda waxyaabahayaga la akhriyayo.
In laga fikiro taas ka hor tii caadiga ahayd waxay ahayd bogag badan: «Goob lagu hagaajiyay qaraarada shaashadda ee 1024 × 748» ama la mid ah. 😛
Haddii ay maamusho inay si quruxsan ula jaanqaadi karto biraawsarka Lynx, waxay noqon doontaa guul muhiim ah.
Haa, waa inaad sharad ku dhigtaa.
Waa hagaag, meeshayda Waxay horey u laheyd mowduuc jawaab celin ah muddo dheer, in kastoo dhibaatadu tahay in la qaato nidaamka AdSense si aysan u dhaawicin la qabsiga go'aamada ay leedahay.
Marka la soo koobo, waxay ahayd waqtigii lagu dhiirrigelin lahaa dhiirrigelinta naqshadeynta bogga bogga.
jawaab celin macnaheedu waa jawaab celin, taas oo ah, waxay uga jawaabtaa si caqli ah ama wax ku ool ah xaaladaha kala duwan ee aan mas'uulka ka ahayn (mas'uul)
Ku dhowaad dhammaan baloogyada wax lagu qoro ayaa horey u leh taas, taasi waa, marka isticmaale uu abuuro boggooda markii ugu horreysay oo uu doorto mawduuca (shaxanka), barxadda aan ku abuuro waxay si otomaatig ah u dhexgashaa naqshad jawaab celin ah.
Waxaan isticmaalaa qalabka loo yaqaan 'NoScript plugin' oo ka dhigaya mid aad u jawaaba, waxay ku jawaabtaa xawaaraha iftiinka iyadoo aan la siinin qoraallada kubad, hehe.
Hadda ka tagida qaabka macquulka ah, waa wax aan macquul aheyn in lagu dhejiyo waxa ku habboon shaashadda 20 'ee shaashadda moobiilka, si kasta oo ay isugu dayaanba, waa laba adduunyo oo kala duwan.
"Jawaab" ayaa loo tarjumay "soo dhaweyn", oo aan ahayn "jawaab celin".
Awood sheegasho waxaa loola jeedaa soo dhaweyn. Jawaab leh, jawaabta.
Ama, sidoo kale, halkii laga dhagaysan lahaa, waxaa loo tarjumi karaa "xasaasi", "falcelin." Halkaas ayaan uga jecelahay.
Naqshadeynta websaydhka Castellon dijo
Sidee wanaagsan u yihiin sawir-qaadashada! salaan
Ku jawaab jawaabta naqshadeynta websaydhka
Isticmaalaha Linux dijo
Google mar dambe ma aqbasho boggag aan ahayn Jawaabcelin. Marka laga reebo, dabcan, waxay ka yimaadeen Blogger. Maqaal aad u fiican iyo macluumaad. Salaan.
Ku jawaab Macaamiil Linux ah